Apple Music for Android hadda waa beta | Wararka IPhone
Apple Music for Android ma ahan beta
Shirkadda ku saleysan Cupertino ayaa hadda soo saartay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan barnaamijka Apple Music ee laga heli karo nidaamka deegaanka ee Android, cusbooneysii taas oo aysan u aheyn nooca beta. Cusboonaysiintaan ka dib, Apple Music for Android waxay gaartaa nooca 1.0 ku dhowaad toban bilood ka dib markii la bilaabay.
Cusbooneysiintan ayaa sidoo kale ku dareysa dejimaha cusub ee barbaraha, siinta isticmaaleyaasha inay si weyn gacanta ugu hayaan muusigga ay ku ciyaaraan adeegga muusigga ee qulqulaya Apple. Si ka duwan Android, macruufka barbaraha wuxuu ku jiraa arjiga dejimaha ee kuma jiro barnaamijka Muusikada.
Intii lagu jiray tobankii bilood ee la soo dhaafay, barnaamijka Apple Music ee nidaamka deegaanka ee Android wuxuu ku jiray beta, in kasta oo horumarada ay Apple ku dartay codsigan, oo bixiya astaamo aan waligeen ku arki doonin macruufka, tusaale ahaan cusbooneysiinta codsigu helay bilawgii sanadka ee arjigu u oggolaaday inuu si toos ah ugu keydiyo muusigga la soo dejiyey kaarka SD si uu u awoodo inuu dhageysto internet la'aan.
Sidoo kale, Apple Music on Android Waxay leedahay widget aan ku dhejin karno shaashadda guriga oo na siisa kontaroolo dib loo maqli karo waxyaabaha ku jira ka sokow inay u sahlanaato helitaanka raadinta Apple Music. Ilaa dhowr bilood ka hor, barnaamijku ma taageerin koontooyinka qoyska Apple Music iyo dib u soo celinta fiidiyaha.
Apple waxay dooneysaa inay ka faa'iideysato dhammaan xulashooyinka ay bixiyaan nidaamka deegaanka ee Android oo ay weheliso codsigeeda muusigga, Dhaqdhaqaaq macquul ah oo aan macnaheedu ahayn in maalin uun aan awoodi doonno inaan ku aragno iPhone, iPad ama iPod taabasho. Haddii aad rabto inaad si toos ah uga hesho barnaamijka Apple Music ee ku jira Android, waxaan riixi karnaa soo socota xiriiriye si toos ah kuu qaadi doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Apple Music for Android ma ahan beta
Waad salaaman tahay, raalli ahow shaki, xagee ikhtiyaarkaas ah inuu ku badbaadiyo muusigga SD-ga oo aanan ka heli karin, hadda iyo kahor midna
Toban shay oo aad u badan tahay inaadan ka aqoon Apple